XURMEYNTA MAALMAHA CIIDDA
Iyadoo ay dhammaad tahay bishii barakaysnayd ee Ramadaan ayaan waalidiinta si gaar ah ugu baraarujinayaa in ay tixgeliyaan farxadda maalinta ciidda. Wareysiyo badan oo lala yeeshay ubadka yaryar ee ku nool dalalka qurbaha (Yurub iyo Ameerika) ayay ku sheegeen in aysan dareemin wanaagga ay ciidaha Islaamku leeyihiin. Qaarkood waxay istaas ku dareen in waalidiintoodu aanay xaadirin goobaha salaadda ciidda lagu tukato.
Waxaa kale oo iyadana dhacda in waalidka qaarkiis ay dadaal badan geliyaan munaasabado aan Islaamku sharciyeyn, sida xafladaha dhalashada caruurta (Happy Birth Day), munaasabadda loogu yeero dabaaldegga sannadka cusub (Happy New Year), iwm. Haddaba walaalahayga Soomaaliyeed waxaan ku adkeynayaa isla markaasna xusuusinayaa in ay muujiyaan shacaa’irta Islaamka marka lagu jiro munaasabadaha Islaamiga ah taasoo ay ajar Eebbe ku kasban karaan.
Sida aan wada ognahay, diinteenna wanaagsan ee Islaamka waxay noo jideysay laba ciidood oo kala ah: Ciidul-Fitri iyo Ciidul-Adxaa. Arrimahaan soo socda ayaan isleeyahay waxay wax ka tari doonaan sidii aan u dareensiin lahayn ubadkeenna farxadda maalmaha ciidda.
1. in qoyska dhammaantiis ay ka qayb galaan salaadda ciidda, si carruurtu ay u arkaan kulanka farxadda leh ee muslimiintu u dabaaldegayaan.
2. in caruurta laga farxiyo oo loo iibiyo dhar cusub haddii dhaqaalaha reerku saamaxayo.
3. maadaama maalmahaasi yihiin kuwo farxadeed waa in macamacaan iyo wixii caruurtu jecel yihiin laga haqab tiro.
4. in la soo booqdo ehelada iyo deriska Islaamka ah oo carruurta la dareensiiyo muhiimadda Islaamku siiyay xiriirinta qaraabada iyo deriska.
5. in carruurta loo qabanqaabiyo xaflado iyo barnaamijyo xiiso leh oo ay ku ciidaan.
6. in laga taxadarro in caruurta looga farxiyo waxyaabo xaaraan ah oo aan diinteennu ogoleyn.
Gunaanadkii waxaan akhristayaasha ku dhiirigelinayaa in loo sii tabaabusheysto maalinta ciidda oo waliba si gaar ah niyadda loogu hayo sidii farxadda ciida loo dareensiin lahaa caruurta. Taasi waxay keeneysaa in ubadku xiiso u qaadaan diintooda Islaamka ah.
Waxaan idiin rejeynayaa ciid wanaagsan iyo dembi dhaaf, meel kasta oo aad ku nooshihiinba.